UNDERCARRIAGE Ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya - China UNDERCARRIAGE Factory
Bonovo na-enye ọtụtụ Track Shoe Bolts & Mkpụrụ na inch na metric nha, ụda ojii ndị a na mkpụrụ osisi bụ nke pụrụ iche maka igbutu ọnụ ọgụgụ eji ewu ewu.
Rubber Kedo akwa
Ngwunye Track Rubber na-enye mgbanwe dị mfe site na-arụ ọrụ na unyi na egwu nchara iji rụọ ọrụ n'elu ebe dị mkpa ebe nchekwa ma ọ bụ traction dị mkpa. A na-eme ha site na inogide, nke siri ike, nke na-eguzogide ọgwụ maka iji nwa oge ma ọ bụ mkpụmkpụ oge dị iche iche. Ngwa ngwa laghachi nchara nchara mgbe a chọghị nchebe. Dabara Adaba Rubber Pads gị nchara esoro excavator bụ ihe ngwọta zuru oke maka iji akụrụngwa dị arọ n'okporo ụzọ gwụchara na ihu na-enweghị mmebi na-agbasawanye igwe gị.